June « 2017 « Dr Myo Thida
MATLAB Simple Program
ဒီ code လေးက လက်ရှိ iSTAR မှာ တက်ရောက်သွားတဲ့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ အသက်ကို အကြမ်းဖျင်း ဆန်းစစ်လိုတဲ့ အတွက် ချရေးဖြစ်တဲ့ program လေးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Program မှာ အပိုင်း ၂ ပိုင်း ပါဝင်ပါတယ်။ ပထမ တပိုင်းကတော့ ရှိ ပြီးသား data အချက်အလက်တွေကို အသုံးပြုပြီး ကျောင်းသားတွေ ရဲ့ အသက် အပိုင်းအခြားကို ဆန်းစစ် ကြည့်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါက ပထမတပိုင်းရဲ့အဖြေ ဖြစ်ပါတယ်။ studentAges
ဒုတိယတပိုင်းကတော့ ကိုယ့် အတန်းထဲမှာ ရှိတဲ့ ကျောင်းသားတွေ ရဲ့အတွက် မွေး သကရာဇ် မေးပြီး အသက်ကို program ကတွက် ယူတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရို ဂရမ်ကို Run လိုက်ရင် ဒါမျိုးလေး ထွက်လာ မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မွေးတဲ့ ခုနှစ်ကို ရိုက်ထဲ့လိုက်တာနဲ့ အသက်ကို တွက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။getAge
How many students are there in your class? 10
When were you born? (Enter year) -> 1988
When were you born? (Enter year) -> 1989
When were you born? (Enter year) -> 2001
When were you born? (Enter year) -> 2005
When were you born? (Enter year) -> 1978
When were you born? (Enter year) -> 1968
When were you born? (Enter year) ->
Level 1 ကျောင်းသားတွေအတွက် မေးခွန်း အဖြစ် မျဝေဖို့ဆိုရင် code တွေကို အင်တာနက် ပေါ် တင်ပေးရင်းနဲ့ကျန်တဲ့ လူတွေ (အထူး သဖြင့် နယ်ကနေ ကိုယ်တိုင် လေ့လာလိုတဲ့ သူတွေ ) စမ်းကြည့် လို့ရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Test3_Easy
This entry was posted in MATLAB.